Ifulethi elitholakala ngokuthula futhi elakhiwe kahle
Santa Pola, Valencian Community, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Toni
Ifulethi elithule neliklanywe kahle elinombhede wosofa onethezekile, i-balcony kanye nephuli.
Ifulethi liwuhambo lwemizuzu emi-3 ukusuka ogwini. Ulwandle luhle futhi luthulile kunaphakathi nendawo. Konke okudingayo ngezidingo zakho zansuku zonke kusendaweni eseduze: izitolo, izindawo zokudlela, amabha. Amabhishi ase-Santa Pola nawo alungele izingane kakhulu njengoba engashoni kakhulu. Siyajabula ukuhlinzeka ngombhede mahhala wemindeni enezingane
Ifulethi liwuhambo lwemizuzu emi-3 ukusuka ogwini. Ulwandle luhle futhi luthulile kunaphakathi nendawo. Konke okudingayo ngezidingo zakho zansuku zonke kusendaweni eseduze: izitolo, izindawo zokudlela, amabha, indawo yokubhaka.
Kukhona isitobhi sebhasi eduze. Ibhasi liya enkabeni yeSanta Pola noma esiteshini samabhasi esimaphakathi (lisuka lapho namabhasi liya e-Alicante, Elche noma Torrevieja). Uma uthanda ukungcebeleka, ungakwazi futhi ukuhamba uye e-Santa Pola (maphakathi) phakathi nemizuzu engu-20.
I-balcony ibheke ichibi elihle, elinelanga, elingabiwa nawe.
Ifulethi liyindlela enhle kakhulu yabantu abathanda ukuhamba ohambweni lwasemini phakathi nosuku, njengoba umgwaqo kazwelonke oholela e-Alicante awukude. Noma kunjalo, ifulethi lithule kakhulu futhi lipholile kancane ezinyangeni zasehlobo. Ebusuku ungalala kangcono nangokuthula kunasenkabeni yeSanta Pola. Amabhishi ase-Santa Pola nawo alungele izingane kakhulu njengoba engashoni kakhulu. Siyajabula ukuhlinzeka ngombhede mahhala wemindeni enezingane
Hlola ezinye izinketho ezise- Santa Pola namaphethelo